‘मलेसियामा DXN ले ठगेको आ’रोप वास्ताविकता यस्तो छ ! - Onlines Time
September 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on ‘मलेसियामा DXN ले ठगेको आ’रोप वास्ताविकता यस्तो छ !
उनको दुखेसो थियो ‘यी नेटवर्किङ्ग व्याव”साय गर्ने भन्नेले” सोझा’लाई नै सास्ती दिदा रहेछन् ।झापाका सुरेन्द्र विकको पिडा पनि कम छैन ।र मलेसिया आएर साथीको द’वावमा डिएक्स नको मेम्वर वनेका उनी को”तरायामा भोकै मेम्वर’ हिडेको झलझल्ती सम्झन्छन् पानीमा कफी मिसाएर पिइदै हिडीयो त्यो समय अरु तिर लगानी गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।’
डिएक्सनमा लाग्दा पिवी वडाउन नचाहिने सामान खरिद गरेको उनको भनाइ छ । ‘अगुवाले धेरै सामान किन्न लगाउथे ।पिवी वडछ वोनस आउछ भनेर तर वास्तविकता त्यस्तो हुदैन थियो’उनले भने ।
कसैले वहकाएर त कसैले अडी कसेर मलेसियामा डिएक्सनको मेम्वर वनाउदै गरेको भुक्तभोगीहरु वताउछन् ।
मलेसियामा रातो च्याउ वाट वने का सामाग्री विक्रि वितरण गर्दै आएको डिएक्सनमा अन्य देशका व्या’क्तीको त्यती संम्लग्नता छैन्।” नेपाल वाट रोज गारी का लागी गएका नेपाली भने यसमा ठुलो पदमा पुग्ने र धेरै पैसा कमाउने लोभमा फसेका छन् ।
दु’खद खबर: डिपेन्डेन्ट भिसामा सपरिवार जापान बस्दै आएकी भण्डारीको अल्पा’युमै नि’धन
August 12, 2021 August 12, 2021 onlinestime